नेपाली सेनाका उपरथीको खातामा ४७ हजार अमेरिकी डलर! - Sidha News
नेपाली सेनाका उपरथीको खातामा ४७ हजार अमेरिकी डलर!
काठमाडौ। नेपाली सेनाका उपरथी प्रभुराम शर्माको बैंक खातामा ४७ हजार अमेरिकी डलर रहेको पाइएकाे छ। उक्त खुलासा उपरथी शर्मा स्वयंले गरेका हुन्। प्रधानसेनापति हुने लाइनमा रहेका उनले सम्पत्ति विवरण बुझाउने क्रममा बानेश्वरस्थित नबिल बैंकको खातामा उक्त रकम रहेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गत भदौ महिनामा सेनाको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानसेनापतिको रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। यसअघि सेनामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिँदैनथ्यो। सेनालाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रयासस्वरूप प्रधानसेनापति थापाले अन्य सैनिक अधिकृतलाईसमेत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका थिए।
प्रधानसेनापतिको आग्रह बमोजिम उपरथी शर्माले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। उक्त विवरण नेपाली सेनाले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। वेबसाइटमा प्रधानसेनापति थापा, बलाध्यक्ष रथी गौरव तण्डुल र उपरथी शर्माको सम्पत्ति विवरण राखिएको छ।
शर्माको नबिल बैंकबाहेक राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक विशालबजारमा १९ लाख रूपैयाँ नगद रहेको उल्लेख छ। उनले सम्पत्ति विवरणमा नबिल बैंकमा रहेको ४७ हजार अमेरिकी डलर (करिब साढे ५३ लाख रुपैयाँ) सैनिक सहचारी हुँदा प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन् भने वाणिज्य बैंकमा रहेको १९ लाख रुपैयाँ विदेश तालिम तथा तलवभत्तामार्फत प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीसँग बैंकमा करिब साढे ७२ लाख रुपैयाँ नगद रहेको देखिएको छ।
शर्माले सम्पत्ति विवरणमा आफूसँग १३.५ तोला सुन र २० तोला चाँदी रहेको उल्लेख गरेका छन्। सुन र चाँदीको स्रोतमा उनले पैतृक तथा केही तलव भत्ताबाट खरिद गरेको उल्लेख गरेका छन्। सम्पत्ति विवरणमा उपरथी शर्माले काठमाडौं र ललितपुरमा १३.३ रोपनी जग्गा रहेको देखाएका छन्। उनले काठमाडौंको नागार्जुन-४ मा ६ आना जग्गामा साढे दुई तलाको घर देखाएका छन्, जुन उनको आमा सुभद्रा पौडेलको नाममा रहेको छ।
साथै, उनले आमाकै नाममा काठमाडौंको नागार्जुन-४ मा ८.५ रोपनी तथा नागार्जुन-६ मा ४ रोपनी जग्गा, श्रीमती सुनिता शर्माको नाममा ललितपुर-१५ मा ८ आना जग्गा रहेको देखाएका छन्। आमाको नाममा रहेको जग्गा पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त भएको र श्रीमतीको नाममा रहेको जग्गा सैनिक सहचारी हुँदा आर्जित रकमबाट खरिद गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनी सन् २००८ देखि २०११ सम्म बंगलादेशस्थित नेपाली दूतावासमा सैनिक सहचारीका रूपमा रहेका थिए।